Eksodosy 12: 1-51
Eksodosy 11 Eksodosy 12 Eksodosy 13
ARY Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe:
Mitenena hianareo amin'ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra, ka manaova hoe: Amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy no ho an'ny isan-trano;
ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona; ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hunisanareo ny zanak'ondry.
Ary hanalany ny ra, ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tataom-baravaran'ny trano izay hihinanany azy.
Ary aza asianareo sisa ho tra-maraina; fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tra-maraina, dia hodoranareo amin'ny afo.
Ary toy izao no hataonareo, raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tànanareo; dia hohaninareo faingana izy, fa Paskan'i Jehovah.
Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita ny ra Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho.
Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo ary amin'ny andro fahafito koa hisy fivoriana masina; tsy hanao raharaha akory hianareo amin'izany andro izany, afa-tsy izay hohanin'ny isan-olona, dia izany ihany no hamboarinareo.
Ary hitandrina ny andron'ny mofo tsy misy masirasira hianareo, fa izany andro izany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta; dia hotandremanareo izany hatramin'ny taranakareo fara mandimby ho lalàna mandrakizay.
Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira hianareo; fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira ao amin'izay itoeranareo rehetra avy hianareo.
Dia nampanalain'i Mosesy ny loholon'ny Isiraely rehetra, ka hoy izy taminy: Mandehana hianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska.
Dia makà hysopa iray fihina, ka atsobohy amin'ny ra izay ao anatin'ny bakoly ary ny ra izay ao anatin'ny bakoly dia anenteno amin'ny tataom-baravarana sy ny tolana roa; ary aza misy mivoaka eo am-baravaran'ny tranonareo avy hianareo ambara-pahamarain'ny andro.
Fa Jehovah handeha hamely ny Egyptiana; ary raha mahita ny ra eo amin'ny tataom-baravarana sy ny tolana roa Jehovah, dia handalo ny varavarana, ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana.
Ary hitandrina izany zavatra izany, hianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay.
Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay homen'i Jehovah anareo araka izay nolazainy hianareo, dia tandremo izany fanompoana izany.
Dia nampaka an'i Mosesy sy Arona izy, raha mbola alina, ka nanao hoe: Mitsangàna, mialà eto amin'ny vahoakako hianareo sy ny Zanak'Isiraely, ary mandehàna ka manompoa an'i Jehovah araka ny nolazainareo.
Ary ny ondry aman-osinareo sy ny ombinareo dia ento koa araka izay efa nolazainareo, ka mandehàna; fa mba tsofy rano aho.
Dia niainga tao Ramesesa ny Zanak'Isiraely ka nankany Sokota, dia lehilahy mahalia làlana tokony ho enina hetsy, afa-tsy ny zaza amim-behivavy.
Ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niara-niakatra taminy, ary ondry aman-osy sy omby, dia fananana be indrindra.
Dia nataon'ny Zanak'Isiraely rehetra izany: araka izay nandidian'i Jehovah an'i Mosesy sy Arona no nataony.